Windows Media Player bụ nnọọ ewu ewu n'etiti ndị si n'ụwa nile. Ma n'agbanyeghị otú ewu ewu a software bụ; Windows Media Player bụ kpam kpam ahụhụ free. Ọtụtụ ikpe a kọrọ ruo ụbọchị banyere achọghị mkpọka nke a ukwuu na-ewu ewu music ọkpụkpọ. Anyị na-aga inyocha a yiri nnọọ ikpe ebe a:
Part 1: Windows Media Player mkpọka i nwere ike na-ezute
Part 2: Olee iji dozie nsogbu a?
Ka anya dị ka ị na-emeghe gị Windows Media Player na-egwu gị audio / video faịlụ, ọ mkpọka ozugbo na njehie ozi "Windows Media Player kwụsịrị-arụ ọrụ." Ná mmalite anyị chere na nsogbu ahụ bụ nwa oge na ọkpụkpọ ga-arụ ọrụ ezi ma ọ bụrụ na anyị na-emeghe ya site na ọzọ. Ma n'agbanyeghị otú ike anyị na-agbalị, na Windows Media Player ga nnọọ ikwu.
Nke a njehie ozi e hụrụ na Windows 7 ma mgbe ụfọdụ ịgagharị anyị chọpụtara na njehie a ozi pụrụ egosi na ọ fọrọ nke nta ọ bụla Windows arụ ọrụ usoro gụnyere Vista, XP na 8. The version nke Windows Media Player bụkwa bụghị dị ka nsogbu a a hụrụ na nsụgharị 11, 12 na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe Ama na-akpata nke okuku:
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịchọpụta ihe ngwa log maka njehie ha, ị ga-ngwa ngwa ahụ na nsogbu nọgidere na-a isi na-akpọ Indiv01_64.key. Kii a na kwekọrọ na Digital Rights Management na ọ bụrụ na cache rụrụ arụ, na ị ga-enwe ike iji mara na Windows Media Player. The Digital Rights Management cache pụrụ ịghọ rụrụ arụ n'ihi na ọtụtụ ihe dị ka na-agbanwe agbanwe nke ngwaike.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche na-re-wụnye mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-edozi nsogbu ahụ, mgbe ahụ ị na-kpam kpam hiere ụzọ dị ka njehie na-adịghị metụtara na mgbasa ozi ọkpụkpọ. The nanị ihe ngwọta nsogbu a bụ wughachi DRM (Digital Rights Management) cache. Mgbe ị na ikpochapụ a cache, na cache na-akpaghị aka kere on ọzọ malite ma nsogbu na-ebilite n'ihi na i nwere re-nweta na ikikere. Ọ bụrụ na ị kechioma nwere ndabere gị ikikere ke mgbasa ozi ọkpụkpọ, ị nwere ike mfe weghachite ha na-ewu gị DRM cache ọzọ. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị bụghị na kechioma, ị ga-aga site na-esonụ:
Nzọụkwụ 1 anya maka DRM cache. Nke a ndekọ a na-emekarị na-ezo n'ebe ọrụ. Iji chọta ndị DRM cache faịlụ, na-emeghe gị c mbanye programData Microsoft Windows DRM cache.
Nzọụkwụ 2 Mgbe ị mepee DRM cache, ị ga-ahụ a ole na ole faịlụ na ya. Ị nwere ike ma ịmepụta ndabere maka ndị a na faịlụ ma ọ bụ ihichapụ ha. Ebe ọhụrụ ikikere na faịlụ a.
Nzọụkwụ 3 Malite Windows Media Player ọzọ na ị na-eme.
3 ụzọ dozie mgbasa ozi ọkpụkpọ mkpọka
E nwere ike ịbụ a ọnụ ọgụgụ nke ihe n'azụ na Windows Media Player mkpọka. Ọ dị mkpa ka ị chọpụta ihe na-n'ezie ihe mere n'azụ mkpọka n'ihi na mgbe ahụ na ị ga-enwe ike ịchọta ihe ngwọta maka ya. The n'elu ikpe e metụtara na DRM cache njehie. Otú ọ dị n'ebe nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị ọzọ ihe mere n'azụ mkpọka kwa. Ị ga-anya nyochaa njehie na ngwa log tupu enwe ọganihu ịchọta ihe ngwọta maka gị okuku.
Ụfọdụ n'ime ihe ndị n'azụ Windows Media Player okuku agụnye:
1. E nwere ike inwe ụfọdụ nsogbu na set elu nke ọkpụkpọ.
2. The nke nwekwara ike metụtara netwọk Ntọala gụgharia nke pụrụ igbochi audio / video gụgharia.
3. The ọkpụkpọ si n'ọbá akwụkwọ nwere ike emerụ.
Ndị a ihe n'azụ na Windows Media Player okuku nwere ike ime na ihe ọ version.
Ebe a na-3 ngwa na mfe ụzọ site na nke i nwere ike imezi gị Windows Media Player nnọọ ngwa ngwa:
Ngwọta 1: Windows inbuilt mmezima ngwaọrụ
Nke a bụ otu nke mfe ụzọ maka idozi nsogbu nke mkpọka na Windows media Player. Eso ndị a na-etinye a ngwọta:
1: Mepee gị akara panel.
2: Pịa na "View All" button ke window pụtara.
3: Ị ga-ahụ a nsogbu shooter maka Windows Media Player Library na Ntọala.
4: Pịa na a mmezima ngwaọrụ na-agba ọsọ ya. Adịghị anya ị ga-abụ na ọgwụgwụ nke ọkachamara na "Gbasoo fix" dị ka ikpeazụ nhọrọ.
5: Pịa na "Gbasoo fix" button na-eme ka ndị kwesịrị ekwesị mgbanwe sistemụ nakwa dị ka Windows Media Player.
6: Reboot gị windows sistemụ arụmọrụ na kasị eleghị anya gị Windows Media Player ga-akwụsị n'iyi.
Ngwọta 2: tọghata faịlụ Ọkpụkpọ
E nwere ike ịbụ a bụrụ na gị Windows Media Player bụghị ike igwu egwu a kpọmkwem ụdị audio / video faịlụ. Nke a bụ ebe faịlụ converters abata play. The Wondershare Video Ntụgharị Ultimate bụ otu ụdị faịlụ Ntụgharị nke pụrụ idozi nsogbu nke Windows Media Player mkpọka site n'ịtụgharị ụdị nke faịlụ. Ị nwere ike mfe ịgbanwe faịlụ ụdị site na isoro ndị a:
1. Họrọ faịlụ ị chọrọ iji tọghata na mgbe ahụ ma ịdọrọ n dobe ya ka Wondershare video Ntụgharị Ultimate ma ọ bụ nanị na-agagharị na faịlụ a.
2. Otu nri akuku nke interface, họrọ mmepụta faịlụ ụdị. Ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ faịlụ extensions dị ka avi, mp4 wdg
3. Ozugbo ị bụ n'aka banyere gị ọsọ ọsọ na mmepụta, pịa na tọghatara bọtịnụ na ala nke ihuenyo.
Ngwọta 3: SFC-enyocha kwa maka achọta si na njehie
Ọ bụrụ na gị Windows Media Player na-akụghịna ugboro ugboro mgbe ahụ e nwere nnukwu ekwe omume nke rụrụ arụ faịlụ gị usoro. Iji chọta na idozi ndị a emerụ faịlụ, SFC scanning-abịa n'ime play! N'oge a scanning usoro, niile na-echebe faịlụ nke usoro na-scanned maka ihe ọ bụla njehie. I nwere ike iso ndị a iji idozi mgbasa ozi ọkpụkpọ n'iyi nke na SFC scanning:
1. Mepee iwu ozugbo na gị Windows arụ ọrụ usoro.
2. Ụdị ndị na-esonụ iwu 'sfc / scannow' na ruturu na pịa ịbanye.
3. Ozugbo ị pịa Tinye, na scanning ga-amalite na ọ nwere ike ịjụ gị maka echichi DVD dị ka mma.
Mgbe ị na-ahọrọ SFC scanning, ọ pụrụ ihichapụ ụfọdụ gị rụrụ arụ faịlụ kwa. Otú ọ dị Windows Media Player ga na-arụ ọrụ were were.
> Resource> WMP> 3 ụzọ dozie Windows Media Player mkpọka